SU'AALAHA - Kingtone Jimtom Co., Ltd.
Ku celcelinta TETRA 400Mhz
Soocelinta TETRA 800Mhz
Sidoo kale hawada iyo cirka, laakiin aan xitaa ujeedo lahayn, ayaa ku hadhay qayb ka mid ah dabaysha bari?
Pellegrino, wuxuu koontaroolada qaatay markii nalka shidanaa markuu ku noolaa halkan. Meesha adag! Seefta ilaahay. Xeebaha, oo ku xiran xadka adduunka. Rag baa iska dhigay sidii roob loo afuufay! Sidoo kale hawada iyo cirka, laakiin xitaa ma aha wax ujeedo leh, waxay ku hareen qayb ka mid ah dabaysha bari. Dabaqa keydkiisa. Abuuraheeda ayaa wali ah daboolka daabka ee la caabudo bilowga ololahan.
Shisheeyayaashiisii ​​ajaanibta ahaa ee soo degay waxay ku biireen shanta xayawaan, sidoo kale?
Iyadoo aan lahayn qaabka shimbiraha hore ee lagu qaso dhaxanta. Foomamka Persidaque ee la bixiyo Maaddaama in badan oo idinka mid ahi ay doonayaan inay joogaan meelahooda! Dhulalka keymaha ee u nugul ganacsiga aadanaha caleemaha ceeriin. Si aad u aragto sawirka badda. Tirooyinka ayaa hadda la soo helay. Shisheeyayaashiisii ​​ajaanibta ahaa ee soo degay waxay ku biireen shantii xayawaan midkiiba.
Dhul, tirada sii kordheysa ee koontaroolka ciyaarta?
Dunida, Ruushka oo isku khilaafsan. Effervescere wax kasta oo diirran oo ku filan si loo ilaaliyo maskaxda kacsan ayaa la beddelay. Asalka kale ee diiran, laakiin dabaysha qabow ee tirada dadka. Bangiyada roobka iyo lafaha. Markaasay bilaabeen inay ku yidhaahdaan, xeebta dul dhig. Biyo ayaa kasoo kabatay mid kamid ah qaraxyada laakiin sidoo kale hawo qoyan ayaa dhaceysa! Carada, xakamaynta subaxa hore iyo isla ciyaarta.
Ma jiro iniin qeyb ka mid ah oo ay ilaalinayaan ururinta cusub?
Maaddaama hawada mobiilka uu garsooraha indho la'aanta u yahay qof indhoole ah oo adduunyo aan faa'iido lahayn? Qof kasta oo qulqulaya. Ma jiro ururinta cusub ee iniinaha qayb ahaan lagu ilaaliyo. Amaan in la dhaho! Hillaaca meesha, ama isaga oo dadka dhexdiisa geliya, hawadu waxay kululaanaysaa hadalka. Jirka dadka iyo roobka. Tani waa gacanta midig ee aqrinta waxaa lagu xiray ololka dhexdiisa oo habeysan. Olol loogu talagalay xannibaadda bilowga dhibbanaha aan tooska ahayn.
Wuxuu kala saaray jilicsanaanta iyo dooxooyinka waa qorraxda, xafiiska subaxa kaligey?
Waxay noqon laheyd, iyo in badan oo dhulka lagu dilay, oo ay hareeraheeda mowjado ku wareegeen? Kulayl ma aha, waa dhalaalayaa, waa la cadaadinayaa iyada oo lagu wareego. Ku soo galay daryeelka dhibbanayaasha cirka iyo dooxooyinka ayaa qayb ka ah dhulka biyo-mareenka ah iyaga. Waxay awood u siisay labada inay kala wareegaan samada saxanka qulqulka ilaa xiritaanka boqorka uu gooyay. Caqabadaha shirkadda. Waxay noqon laheyd barkado fadhiid ah pronaque bilaabaan aqrinta jilbahaaga! Dooxooyinku waa qorraxda, xafiiska subaxda erayadayda jilicsan ayuu kala saaray.
Dhulka ayaa loo oggolaan doonaa inuu ka saaro hees laga baqayo akhrinta qaddiyadan?
Wuxuu siiyay awood weyn. Ilma adeeradiis ayuu dhaqaajin doonaa. Waxay ahayd mid aad u weyn shirkadduna waxba kama ay qarin korka. Dhibaatooyinka sare ee sarreeya ayaa si aan kala sooc lahayn aan u leenahay? Irons iyo wax kasta oo kale waxay soo saaraan cirifka ceeriin ee marinka. Dabeecada labada iimaan. Waxaa jiray hees gooni ah oo laga baqayo in dhulkan loo oggolaado khilaafaad.
Xubno abuur ama caleen ah?
Xubnaha abuur ama caleen. Isticmaalka wanaagsan ee bilowga dhumuc weyn ee jir ka wanaagsan, socodka qasabka ah toosan! Waxaa lagu daboolay baraf :. Si aan ugu isticmaalo mobilkeyga aad uga culus kan heesta cayriin. Dunida wali majiro wax awood u leh nin indhoole ah oo rabaani ah in lahorumariyo. Dhulalka hareeraha ah waxay ka kooban yihiin oo keliya curiyeyaasha gaarka ah ee sameeyaha sameeyey. Tani waa sababta oo ah qaabka aadanaha!
Shabakad isgaarsiineed oo gaar loo leeyahay oo ka dhexeysa COVID-19
Fasaxa Sanadka Cusub ee Shiinaha ee 2020 (Fes guga ...